Shambadza pano | IPhone nhau
Kana bhizinesi rako rakanangana nekutengesa kweiyo iPhone, iPod Touch, zvishandiso uye / kana zvinoshandiswa zvezvinhu zvese zvigadzirwa kana chero imwe mhando yerunhare mbozha kana masevhisi akabatana, IPhone nhau iwo mukana wakanaka wekusvika kune vatengi vako.
IPhone nhau ndiyo webhusaiti huru yakatsaurirwa 100% kune iyo iPhone Apple muchiSpanish. Svikira kune vangangove vatengi vari kutsvaga ruzivo nezve iyo iPhone.
Mwedzi wega wega tine zvakawanda kupfuura 2,5 mamirioni peji maonero yevashandisi vanofarira iyo iPhone nezvayo zvinhu. Nekushambadzira zvigadzirwa zvako uye masevhisi pane yedu webhusaiti, iwe unosvika mamirioni evanogona kuve vatengi nekukurumidza uye zvakachipa.
Kuti utibate nezvenhau dzekushambadzira shandisa fomu inotevera: